कलाकार बिनै बज्ने भो ‘पञ्चेबाजा’ ? « Ramailo छ
कलाकार बिनै बज्ने भो ‘पञ्चेबाजा’ ?
फिल्म ‘पञ्चेबाजा’ यही शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । दिनगन्ती सुरु हुँदै गर्दा फिल्मप्रचार प्रसार व्यापक हुनु पर्ने हो । तर फागुन ११ गतेदेखि रिलिज हुने फिल्मको प्रचार प्रसार शून्य जस्तै छ । आखिर किन त ?
खासमा चिनिएका कलाकार प्रचारमा समय नदिएपछि ‘पञ्चेबाजा’ को प्रचार प्रसार शून्य हुन गएको हो । फिल्म मुख्य पात्र अभिनेता सौगात मल्ल फिल्म जय भोले को सुटिङमा व्यस्त छन् । सौगातसँगै कलाकार बुद्धि तामाङ पनि सोही फिल्मको सुटिङमा छन् । अर्का नायक कर्म सुरुदेखि नै ‘पञ्चेबाजा’को प्रचारमा खासै सहभागी छैनन् । प्रोमो हेर्नुस् :
फिल्मकी मुख्य नायिका जस्मिन श्रेष्ठ नव हुन् । फिल्म युनिट यतिबेला जस्मिनलाई चिनाउनमै दौडधुप गरिरहेका छ । फिल्मर्की अर्की अभिनेत्री सृजना सुब्बाले ‘पञ्चेबाजा’को विषयमा मिडियामा बोलेकै छैनन् । अब कलाकारले साथ नभएको पञ्चेबाजा हलमा कस्तो बज्ला त ? गीत हेर्नुस् :
घनश्याम लामिबछाने निर्देशित फिल्म ‘पञ्चेबाजा’ लाई राजेश शाहीले निर्माण गरेका हुन् । फिल्मलाई हरी घले लामाले खिचेका हुन् ।